Warshad shumacyo soy wax iibiya qaabka shumaca shumaca udgoon | Winby
qaabka soy wax yankee shumacyo udgoon
Shumacyo udgoon muddo dheer
Shumac kasta wuxuu culeyskiisu yahay 13-14 wiqiyadood wuxuuna leeyahay celcelis ahaan waqtiga gubashada oo ah 75-80 saacadood oo ka dheer kuwa kale.
Cabbirka: 10.1cm (Width) * 13cm (Dherer)
Waxaan bixinnaa adeegga macaamiisha ODM & OEM.
waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga mustaqbalka fog ee Shiinaha.
Waxaan ku takhasusay shumacyada muraayadda carafta leh, Shaaha-nalalka, Shumacyada tiirka, Shumacyo codbixiyayaal ah, shumacyo heysta, laambado iyo waxyaabo kale oo ceyriin ah oo shumacyo ah.Waxaan u heellan nahay inaan u keenno raaxeysi, qaab iyo tayo macaamiisheena leh khibrad 20 sano ah.
Midabka, carafta, astaanta iyo xirxirida dhamaantood waa la waadiqi karaa !!!
Muunado ayaa la heli karaa.
Waxyaabaha Weelka dhalada shumaca + soy wax + daboolka galaaska
Cabir 10.1cm (Width) * 13cm (Dherer)
Culayska wax 385g
Miisaanka guud 875g
Hore: hadiyad yankee style shumacyo udgoon
Xiga: yankee style shumacyo udgoon
shumac madow oo shumac udgoon ah
100% shumaca tiirka beeswax dabiiciga ah saafi ah
shamac buluug / cagaar udgoon qaab udub
Shumaca udugga summada shakhsi ahaaneed
Shumaca wax lagu kariyo ee wax lagu shito shumaca shumaca